အထီးအရွယ်ရောက်ဖျော်ဖြေသူများအကြား Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စစ်တမ်းတစ်ခု (2018) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်
Volume ကို 199, Issue 4, ဖြည့်စွက်ဧပြီလ 2018, စာမျက်နှာများ e1006-e1007
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည် / အလုပ်မဖြစ်: အကဲဖြတ် II ကို
အမျိုးသားအရွယ်ရောက် Entertainment များထဲတွင် MP74-18 Erectile အလုပ်မဖြစ်: တစ်ဦးကစစ်တမ်း
Dubin၊ Justin၊ Aubrey Greer၊ Ian O'brien၊ Eric Leue နှင့် Ranjith Ramasamy တို့ဖြစ်သည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအနုပညာရှင်တွေကြားတွင်အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူတို့တွင် erectile အကူအညီအထောက်အပံ့များကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
တစ်ဦးက 40-ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းအခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (FSC), အအရွယ်ရောက်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏မြောက်အမေရိကကုန်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးနှင့်အတူပူးပေါင်းမှတဆင့်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်အထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေမှုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ စစ်တမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်ရှိနိုင်စစ်ဆေးခြင်းန်ဆောင်မှုများအတွင်းသူတွေကိုဖို့ FSC အားဖြင့်ဇီဝဗေဒ penises ရှိခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအနုပညာရှင်တွေအဖြစ်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်း၏စံတွေ့ဆုံခဲ့ရသူ (PASS,) ဒေတာဘေ့စလှေတျတျောမူခဲ့သညျ။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအခြေခံလက္ခဏာများ, အမျိုးမျိုးသော erectile အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကြိမ်နှုန်း, ဟို steroids ဝယ်ယူလျက်, Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (IIEF) စစ်တမ်းကို အသုံးပြု. erectile function ကိုအကဲဖြတ်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများအမည်ဝှက်ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Microsoft က Excel ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ 81 ဖြေဆိုသူ, 62 အရွယ်ရောက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်၏ပါဝင်မှုစံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယုတ်အသက်အရွယ် 37.8 ± 11.6 နှစ်ပေါင်း (အကွာအဝေး 20-70) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာ 62% (73 / 45) ဆေးပြားသာ, 62% (58 / 36) ဆေးပြားနှင့်ဆေးထိုး, 62% (13 / 8) ထိုးဆေး, အဘယ်သူမျှရှိခဲ့: အ 62 ယောက်ျား၏, 1.6% (1 / 62) erectile အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအသုံးပြု penile implants ။ အဆိုပါဟို Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှု 16% (10 / 62) ဖြစ်ဖို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ erectile အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုသုံးသူ 45 ယောက်ျား၏, 42% (19 / 45) (58 / 26) သာအလုပ်နှင့် 45% အဘို့ထိုသူတို့အသုံးပြုသောအလုပ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယေဘုယျအား, လူ 42% (26 / 62) ကို IIEF စစ်တမ်းပေါ်တွင်အခြေခံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့. မှတ်စု၏, 37-7 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျား၏ 19% (20 / 29) ပြင်းထန် ED မှအလယ်အလတ်ခဲ့။ အဆိုပါ9ဖြေဆိုသူထဲက 62 စုစုပေါင်းဇီဝ penises နှင့်အတူအမျိုးသမီးဖျော်ဖြေမှုလိင်အထီးရှိကြ၏။ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးအကြားပျမ်းမျှ IIEF ရမှတ် 20 ±6ခဲ့ကြသည်။
ဤသည်အထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအနုပညာရှင်တွေကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက် erectile အကူအညီအထောက်အပံ့များကို အသုံးပြု. နေသော်လည်းအထီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအနုပညာရှင်တွေကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့ 30 နှစ်ရှိပြီထက်အသက်ငယ်ဖျော်ဖြေရေး မှလွဲ. အထွေထွေလူဦးရေနဲ့ဆင်တူဖြစ်ပေါ်လာသည်။